ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကို အမြဲလိုလို လှုပ်ခါသွားစေတဲ့ မတ်မတ် သင်ဇာ က တော့ နုပျို နေသေးကြောင်း သက်သေ ပြလိုက် တဲ့ ဗီဒီယို – Cele Cupid
ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကို အမြဲလိုလို လှုပ်ခါသွားစေတဲ့ မတ်မတ် သင်ဇာ က တော့ နုပျို နေသေးကြောင်း သက်သေ ပြလိုက် တဲ့ ဗီဒီယို
EverBest M | September 29, 2021 | Celebrity | No Comments
မကြာ သေးမီ က သင်ဇာ ဟာ သူမ ရဲ့ Facebook my day လေးမှာ application တစ်ခု ကိုသုံးပြီး အသက်အရွယ် ကို ခန့်မှန်းတဲ့ ဗီဒီယို လေး ကိုတင် ပေးလာပါတယ်။ အာ့မှ ာဆို ရင် သင်ဇာရဲ့အသက် အရွယ်ကို ၁၅နှစ်လို့ ပြထားတာကြောင့် သင်ဇာ တစ်ယောက် ပျော်ရွှင် ကျေနပ် နေ တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကဲ….ပရိသတ် တွေ အတွက် ဒီဗီဒီယို လေး ကို ပြန် လည် မျှဝေပေး လိုက် ပါ တယ် နော် ။
ပရိသတ် ကြီး ရေ …. ပုရိသ တွေရဲ့ သည်းသည်း လှုပ် ဝန်းရံခံရတဲ့ အနု ပညာရှင်ဆယ်လီ တွေထဲမှာ သင်ဇာဝင့်ကျော် တစ်ယောက် လည်း အပါ အဝင် ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမရဲ့ ကျစ်လျစ် လှပ လွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းဟာ လည်း မိန်းကလေးချင်းပါ ကြွေရတဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီ လေးဖြစ်ပါ တယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော် ဟာ သူမရဲ့ခန္ဓာ ကိုယ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အမြဲ ဂရု တစိုက် နေလေ့ ရှိသူ ဖြစ်ပါ တယ် ။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လည်း အပြင်းအထန် လုပ်လေ့ရှိသူပါ။သင်ဇာဟာ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်တာ ကြောင့် ရုပ်ရှင်ကားကြီး တွေ အထိပါရိုက်ကူးအောင်မြင်နေတဲ့ ဒိတ်ဒိတ် ကြဲ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ရုပ်ရည်အလှမှာလည်း အပြစ်ဆိုဖွယ် မရှိ တာကြောင့် အသက်၃ဝ ကျော်တာ တောင် ယုံချင်စရာမရှိ အောင် ကို ထိထိမိမိလှ နေ တာ ပါ နော် ။
Source & video Credit : Thinzar Wint Kyaw’s Facebook my day
မၾကာ ေသးမီ က သင္ဇာ ဟာ သူမ ရဲ့ Facebook my day ေလးမွာ application တစ္ခု ကိုသုံးၿပီး အသက္အရြယ္ ကို ခန႔္မွန္းတဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကိုတင္ ေပးလာပါတယ္။ အာ့မွ ာဆို ရင္ သင္ဇာရဲ့အသက္ အရြယ္ကို ၁၅ႏွစ္လို႔ ျပထားတာေၾကာင့္ သင္ဇာ တစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ ေန တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကဲ….ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ဒီဗီဒီယို ေလး ကို ျပန္ လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ ။
ပရိသတ္ ႀကီး ေရ …. ပုရိသ ေတြရဲ့ သည္းသည္း လႈပ္ ဝန္းရံခံရတဲ့ အႏု ပညာရွင္ဆယ္လီ ေတြထဲမွာ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ တစ္ေယာက္ လည္း အပါ အဝင္ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူမရဲ့ က်စ္လ်စ္ လွပ လြန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္းဟာ လည္း မိန္းကေလးခ်င္းပါ ေႂကြရတဲ့ အမိုက္စား ေဘာ္ဒီ ေလးျဖစ္ပါ တယ္။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ဟာ သူမရဲ့ခႏၶာ ကိုယ္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အျမဲ ဂ႐ု တစိုက္ ေနေလ့ ရွိသူ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လည္း အျပင္းအထန္ လုပ္ေလ့ရွိသူပါ။သင္ဇာဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းမွာလည္း ထူးခၽြန္တာ ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီး ေတြ အထိပါရိုက္ကူးေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဒိတ္ဒိတ္ ၾကဲ မင္းသမီးေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ႐ုပ္ရည္အလွမွာလည္း အျပစ္ဆိုဖြယ္ မရွိ တာေၾကာင့္ အသက္၃ဝ ေက်ာ္တာ ေတာင္ ယုံခ်င္စရာမရွိ ေအာင္ ကို ထိထိမိမိလွ ေန တာ ပါ ေနာ္ ။
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ သတင်းအခြနေအမှန်တွေကို ပြောပြ လိုက်တဲ့ ရှေ့နေ
“ဂျီးတွန်း ပေး ပါ ကိုကိုရယ်”လို့ပြောပြီး အကြမ်းစားပုံတွေ တင်ပေးလာတဲ့ မေပန်းချီ
G fatt က နန်းစု ကို မမုန်းပါဘူး ချစ်နေရက် နဲ့ စွန့်လွတ်လိုက်တာလို့ ပြောပြခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်
လန္းဆန္းတက္ၾကြမႈ အျပည့္နဲ႔ ဆက္ဆီက်က် လွရက္လြန္းေနတဲ့ XMUE XMUE ရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးမ်ား